China Plate and Tube လေဆာဖြတ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - XTLASER
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပြားနှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
XTLASER ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်သောလေဆာစက်မှုလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်လေဆာအသိဥာဏ်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်ကိုအဓိကထားသည်၊ ဖောက်သည်များကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စနစ်ဖြေရှင်းမှုများဖြင့်ထောက်ပံ့ပြီးရှေ့ဆက် ဆက်၍ လုပ်ဆောင်သည်။ hundreds တစ်ချိန်တည်းတွင်ရာနှင့်ချီသောလေဆာစက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏တည်ရှိမှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုကြိုဆိုပါသည်။
Plate and Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းရှိသောလေဆာဖြတ်ထုတ်စက်များဖြစ်သည်။ ဤဗီဒီယိုတွင် 3mm kW လေဆာခေါင်းနှင့်ကာဗွန်သံမဏိအထူ 8mm ရှိသည်။ သံမဏိပြားများအောက်တွင်ကောင်းသောသံထည်စုပ်ယူနိုင်မှုနှင့်အတူ၎င်း၏ပုံသဏ္shapeာန်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးမည်သည့်အခါမျှအကောင်းဆုံးသောစက်မှုပစ္စည်းနှင့်ပုံပျက်ခြင်း။ ၄ င်း၏ Active Anti-collision Function သည်လေဆာခေါင်းများ၏ပျက်စီးမှုနှုန်းကိုထိရောက်စွာလျှော့ချပေးပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်သက်သာစေသည်။ အကယ်၍ သင်သတ္တုပြားနှင့်ပြွန်နှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ရန်လိုအပ်လျှင် Plate နှင့် Tube Laser Cutting Machine သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
စက်များအားလုံးသည် European Union CE authentication ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး F အမေရိကန် FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး ISO 9001.XTLASER နည်းပညာကိုဂျာမနီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှား၊ မလေးရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။ စာရွက်နှင့်ပိုက်ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းဆွဲထားသောကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် Plate နှင့် Tube Laser ဖြတ်တောက်စက်များသည်ရေနံနှင့်ပိုက်ပစ္စည်းများ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အဓိကအားဖြင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စသည်တို့
1000w Fiber Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Cs အဘို့အ Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Ss များအတွက် Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ss အတွက် Fiber လေဆာဖြတ်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များထိထိရောက်ရောက်နှင့်တည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
XTLASER သည်ကျော်ကြားသော ပြားနှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ဖန်စီဒီဇိုင်းများရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ပြားနှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ပြားနှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!